The flanging akpụ usoro akụrụngwa bụ a flanging igwe. N'iji igwe na-enwu enwu, ihe mkpuchi igwe siri ike nke gụnyere ọla na-adịghị agbanwe agbanwe, ọla na-abụghị ferrous, igwe anaghị agba nchara, wdg na-agbagọ agbagọ siri ike iji mepụta akpa nwere mgbidi dị nha ma ọ bụ na-akpụgharị na nhazi n'ime akụkụ na-atụgharị oghere nwere oghere pụrụ iche. . Ntughari bụ ka ejikọ oghere dị na isi, igwe na -agba ọkụ na -ejikọ isi na oghere ọnụ ka ha na -atụgharị na oke ọsọ. N'otu oge ahụ, site na ngagharị na inye nri, oghere ahụ nwere nkwarụ na mpaghara, ma emesịa nweta akụkụ axisymmetric.
Eji maka ihu na azụ flanging nke ọnụ ụzọ panel
Nri → idobe → flanging → blanking
Ọkpụrụkpụ nke flanging ihe (0.6-0.8) mm
Ngwa ngwa (4-9) cm
Ịrụ ọrụ nke ọma 8-10m / min
Ike injin isi 4kw
Isi ojiji ọnụ ụzọ ọkọlọtọ na ọnụ ụzọ na-abụghị ọkọlọtọ elu na isi ala
Kpachara anya na ịdị mma, njikwa njikwa
Nkwado maka nhazi ebu na ịhazi nlele nlele, ụlọ ọrụ ahazila ngalaba mmepụta na njikwa, kwekọrọ nkenke, ahịrị mmepụta igwe buru ibu,
Mmepụta ọkachamara, mma ọdịnala
Anyị bụ ụlọ ọrụ nwere “teknụzụ na ihe ọhụrụ” dị ka isi, na-elekwasị anya na R&D, imepụta, na ire igwe na akụrụngwa kpụrụ akpụ, wee kwado nhazi nkeonwe. Companylọ ọrụ ahụ agbakọla ọtụtụ afọ nke ahụmịhe ụlọ ọrụ na -ere ngwaahịa n'ụwa niile.
Companylọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ afọ nke akụkọ ihe mere eme na ike siri ike. N'ime ọrụ nyocha na mmepe ogologo oge, ụlọ ọrụ anyị agbakọbala ọrụ nka bara ụba na ahụmịhe bara uru. Akụrụngwa arụpụtara ma rụpụta nwere uru nke arụrụ ọrụ siri ike, mkpụrụ dị elu, ọrụ dị mma, yana ike dị ala, ndị ọrụ nabatara ya nke ọma.
Ụlọ ọrụ anyị na -enye ọrụ agbakwunyere agbakwunyere nke mmepe ngwaahịa na imewe, mmepụta na nrụnye, inye ọrụ na ọzụzụ. Anyị ji obi anyị niile anabata ndị ọrụ ụlọ na ndị mba ọzọ ka ha gaa leta, kpaa nkata ma duzie ha.
Nke gara aga: Mmepụta akara nke nkịtị oghe leveling igwe
Osote: Pịkụl jikọtara ọnụ
Igwe na -ekpuchi windo na -enweghị ọkụ
Ngwa akwụkwọ obosara sara mbara ma dịkwa warara